Mpampianatra gitara ao amin’ny Conservatoire de musique de Bordeaux , matihanina amin’ny fitendrena gitara i Rija Randrianivosoa,
Rehefa misy hetsika ataon’ny artista kalaza aty am-pita na any an-tanindrazana dia izy no « mpanaraka » mahavantana indrindra noho ny fahaizany
Erick Manana, Regis Gizavo, D’Gary, Aïna Quach, Lalatiana, Fenoamby…raha tsy hitanisa afa-tsy ireo isika, dia mametraka ny fahatokisany tanteraka daholo eo am-pelantànan’ingahy Rija. Eny,ambony sehatra mantsy dia « tànan-kavanana » tokoa ny lehilahy.
Na izany aza anefa dia manana ny maha izy azy ihany koa i Rija satria, manao fikarohana ara-mozikaly izy; ka ny vokatr’izany dia fehezan-kira nampintondrainy ny anarana hoe : “HOSODOKO”. Raisiko ho toy ny sary hosodoko,hoy izy, ny mozika...mba '' hankafizin'ny maso" ihany koa.
Ankoatra izay dia mbola ny lehilahy ihany no nantsoin'Andriamatoa Jean Luc Raharimanana , mpanoratra "miteny frantsay" (francophone ) , handravaka ankira ny tantara andam-pihazo izay nosoratany mitondra ny lohateny hoe: '' LES CAUCHEMARS DE GECKO" ( hita eto) . Mandritra ny Festival d'avignon ( 20 - 25 jolay 2009).
Indro àry atolotra anareo ny resaka an-tsary mihetsika nifanaovanay taminy.
Miaraka amin'i Erick Manana
Miaraka amin'i Lalatiana
Miaraka amin'i Aïna Quach